SPEECHES Budget Vote Speech 2018 by Minister in IsiZulu
DRDLR Home > SPEECHES > Budget Vote Speech 2018 by Minister in IsiZulu
Budget Vote Speech 2018 by Minister in IsiZulu
Amalungu Ahloniphekile ePhalamende
Abalingani bethu kanye nabathintekayo ekuThuthukisweni Komhlaba kanye Nokushintshwa Komhlaba.
Abalingani Bethu baseNingizimu Afrika
Manene na Manenekazi
Ngizizwa ngihloniphekile ukuthi ngethule lolu hlelo lwesabelozimali sezoMnyango Wezokuthuthukiswa Komhlaba kanye Nokushintshwa Komhlaba ngonyaka esigubha ngawo iminyaka eyikhulu kwazalwa ubaba wesizwe uNelson Rolihlahla Mandela.
Lona unyaka lapho kukhunjulwa iminyaka eyikhulu kwazalwa isithwalandwe uMadiba. Kufanele sikhumbule ukuthi ngonyaka ka-1994, iPhalamende elaliqokwe ngokweDemokhrasi lashaya umthetho wokuqala wokubuyiselwa kabusha kwamalungelo omhlaba (Umthetho:22 ka-1994). Lokhu kwenzelwa ukuvuma ukuthi ubulungiswa bokubuyiselwa komhlaba kubalulekile ukubhekana nezinselelo zobubha, ukungasebenzi kanye nokungalingani, Ngonyaka ka 1995, singakaqedi nonyaka sikule Demokhrasi yethu, uMadiba wakhumbula ukuthi,
"Inkululeko neDemokhrasi yangonyaka odlule, yaletha ilungelo lokubuyiselwa komhlaba. Lelo lungelo lalihambisana namathuba amahle okubhekana nemiphumela yamakhulu eminyaka yokuqhwagwa komhlaba nokungamukeleki kwaleso simo. Ekugcineni singabampisholo sesingaba neqholo lokubhekana namathongo ezinhlamvini zamehlo sithi: Imizamo yenu kayizange iwele phansi."
UMadiba wayekuqonda ukubaluleka kwesiqinisekiso sokuthi umhlaba owathathwa ngokungafanele kudingeka ubuyiselwe kubantu. Wayekuqonda ukuthi ukusatshalaliswa nokubuyiselwa kabusha komhlaba, ukuphepha nenhlalakahle yizakhiwo ezimqoka zesivumelwano sokwakha umphakathi lapho zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika, abampisholo nabamhlophe, bazohambela phezulu, ngokuqinisekiswa kwelungelo lokungabandlululwa nokunikezwa isithunzi sobuntu obuhloniphekile.
Ngesikhathi umphakathi waseCremin unikezwa umhlaba ngonyaka ka-1998, uMadiba wasikhumbuza ukuthi:
"Abantu baseNingizimu Afrika balwa izimpi zeminyakanyaka ngenxa yomhlaba. Izivavube ezaletha enkulu intukuthelo eyabhebhetheka njengomlilo wequbula. Kwafa abantu abaningi ngenxa yomhlaba. Izwe laseNingizimu Afrika kalehlukile kwamanye amazwe emhlabeni kepha ezweni lakithi, ukuphucwa komhlaba kwakuyingxenye yejoka lengcindezelo nokubandlululwa okwaqhatha abohlanga ukuthi babhekane ngeziqu zamehlo. Lokhu kuthathwa komhlaba kwadala ukuthi abampisholo baphenduke ondingasithebeni kwelakubo lenkaba okuyikhona okwabhebhethekisa ukungalingani, ukucwasana nobuphofu."
Izinqumo zenkomfa yesi-54 ye-African National Congress ezimaqondana nokuhlwithwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo kwenza ukuthi kubekhona ukugxila okubalulekile kuzinselelo zokuguqulwa kwezimiso zomhlaba okubandakanya ukuhamba kancane kohlelo kanye namanani aphezulu okuyikhona okudale ukuhlanekezeleka ezimakethe nokubambezeleka ukulungiswa okusheshayo kokungalingani.
Enkulumeni yokuqala ayethulela isizwe uMongameli Cyril Ramaphosa wabophezela uhulumeni "ukuthi uzosheshisa ngohlelo lokubuyiselwa kabusha komhlaba okungathinti kuphela izingqinamba zomlando wokungalingani kepha ukuheha abakhiqizi abaningi kulo mkhakha wezolimo.
Kummongo wokubuyiswa komhlaba wabophezela uhulumeni "ukuthi uzoqhubekela phambili ukuza namasu anohlonze angasetshenziswa ukuphumelelisa lo msebenzi" kanti leli su lizobandakanya uhlelo lokudliwa kwempahla ngaphandle kwesinxephezelo njengokwezimiso nezinqumo zenkomfa-54 ye-African National Congress.
Kunkulumo-mpikiswano ePhalamende ngezibophezelo azenza enkulumeni yesizwe, uMongameli waphinda wakugcizelela ukuthi ukuhlwithwa komhlaba kwabohlanga kusetshenziswa Umthetho Wezwe Lomhlaba ka-1913 kwabayisono sokuqala somgomo wobandlululo. Nanamuhla imiphumela yezisihla zobandlululo isezwakala emphakathini kungakho kudingeka singalenzi iphutha, lo monakalo kufanele ulungiswe.
Ngokuhambisana nenqubo eqhubekayo ePhalamende yokuchibiyelwa koMthethosisekelo okunikeza igunya lokuhlwithwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, noMnyango wami uzobamba iqhaza kule nkulumo-mpikiswano ngegunya esilinikezwa uMthethosisekelo ngokuhlahla indlela eyokuba nomthelela oqokothile kulolu guquko.
Kunentshisekelo yokuqhubekela phambili ngokuguqulwa kwesimo somnotho kungakho sizimisele ukuqinisekisa ukuthi ubunikazi bomhlaba buba yisisekelo sokuthuthuka kwabantu kwezomnotho.
Njengoba uhlelo lwasePhalamende luya lucaca, uMnyango uzoqhubekela phambili ngezinhlelo zokuguqulwa kwezimiso zomhlaba ngokusebenzisa izinhlelo ezifanele zokubuyiswa komhlaba, ukuhlukaniswa komhlaba kabusha nokunikezwa ilungelo lobunikazi ngokusebenzisa imibandela esivele isetshenziswa yoMthethosisekelo ebeka isinxephezelo esilinganiselwe ngokusemthethweni okufaka phakathi izimo ezinjengokubuyiswa komhlaba kubanikazi bezisebenzi nezakhamuzi zasemapulazi.
Ukusungulwa kweHhovisi Lomlinganisi-jikelele ngokusetshenziswa kwezihlinzeko zamanj zoMthethosisekelo seziqalile ukuveza imiphumela emihle ngamanani akhokhelwayo uma kuthengwa umhlaba.
salo nyaka sihlose ukwethula uMthethosivivinywa Womhlaba Wezolimo kuyosiza uma ungasetshenziswa ngokubambisana noMthetho Wokulinganisa ka-2014 okuzonikeza amandla okuqhubeka nesigaba-25 wezimiso zokunxephezela ezilungile nezilinganayo. UMthethonqubo woMthethosivivinywa womhlaba wezoLimo uhlose ukuhlinzeka ngohlaka oluzocacisa ngesilinganiso-bunjalo sobunikazi bomhlaba emhlabeni wezolimo.
Sizoqhubeka nokusebenzisa amandla aphelele wemithetho ekhona ukuze silandele ukuthuthukiswa komhlaba kanye nokushintshwa komhlaba.
Sihlalo Ohloniphekile, isimo sokuthathwa komhlaba ngokungekho emthethweni esikubona kwenzeka ezweni lonke kuyinkomba yokukhungatheka kwabantu bakithi ngezinga lokucothoza kohlelo lokuguqulwa kwemigomo yezomhlaba
Naphezu kwenqubekelaphambili ebhalisiwe kuze kube manje, akubonakali kunomthelela wezomnotho onenzuzo empilweni yabantu bakithi. Ukudlondlobala kokusetshenziswa kwezomnotho okumbaxambili kubonakala kunganqandeki.
Umbuzo obalulekile ukuthi yikuphi okwehlukile esizokwenza ukuze sivule amasango okuthuthukiswa kwabantu bakithi kwezomnotho ngokugcwele.
Ukuthuthukisa indlela yokusebenza kahle ohlelweni lokubuyiselwa komhlaba siyazibophezela ukuqinisa amandla eKhomishana ekubuyiselweni kwamalungelo omhlaba kubantu. Lokhu kuzobandakanya ukucubungula imodeli yokusebenza efanelekayo, ukuhlelwa kabusha kwenqubo yesimangalo nokunciphisa izimiso zokusebenza ezingadingekile ukuze uhlelo lokufakwa kwezicelo zokukhokhelwa luhambe masishane.
Malungu ahloniphekile, kuze kube yimanje, sikhokhele izicelo ezingama-80 664 ezizuzisa abantu abayizigidi ezimbili ngenani lemali engama-R40 billion, kubandakanya nemali yesinxephezelo. Inani elingama-163463 kulawa ngamakhaya aphethwe ngabesifazane. Kuze kube manje siye savuselela amahektha ayizigidi ezingama-3,5 zomhlaba angasetshenziselwa ukusiza ukuguqula izimpilo zabantu bakithi ababambelele emnothweni wesibili. Izwe elingenazo izisekelonqangi ezidingekayo liyehluleka ukuvula amathuba okuthenga ngokugcwele ezimakethe.
Kulo nyaka wezimali sizosebenza ngokuzikhandla ukuthi siqinise intuthuko edidiyelwe eqinisekisa ukuthi ukutholakala komhlaba kuveze amathuba omnotho abanzi. Kunezinselelo zohlelo oluyizithiyo ekuthuthukisweni kwabazuzi ekuguqulweni kwezimiso zomhlaba. Ukusekela abalimi abamnyama, ukwabiwa okukhethekile kwamalungelo amanzi, ukuhlinzekwa ngengqalasizinda kanye nokufinyelela ezimakethe kuyoqiniswa. Lezi zikhala kufanele zivalwe.
Ngonyaka wezimali ka-2018/19, sihlose ukuxazulula izimangalo zomhlaba ezingama-1151 ngenani lika-R2 billion. Imali engama-R700 million isibekwe eceleni ngenjongo yokuhambisa phambili uhlelo lokwesekwa kwamapulazi akhokhelwa phambilini.
Ngo-2017, isimangalo somphakathi wase-Double Drift sanxeshezelwa ngokuvumelana nomphakathi wamalungu angama-1500, wathola amahektha omhlaba angama-1300 eNtshonalanga-Kapa okunezimboni ezingama-21 okumanje leyo ndawo ibizwa nge-Double Drift Nature Reserve. Lo mphakathi uzobe uhlola iphrojekthi yokulima ngohlelo olusamdlalo.
Enye yezimangalo zokubuyiselwa komhlaba okungezokuqala nezinkulu kunazo zonke ezweni ezomphakathi wase-Ravele esifundazweni saseLimpopo. Ukudluliswa ngokusemthethweni kwalo mhlaba kwenzeka ngonyaka ka-2005. Inhlangano yomphakathi 'iCommunal Property Association' iyadlondlobala ekuthuthukiseni umhlaba, ngaleyo ndlela kuba nomthelela omuhle ekusimamiseni ukuvikeleka komphakathi kuzinselelo zendlala nobubha ezweni lethu. I-CPA iyaqhubeka nokurekhoda inzuzo futhi ithumela imikhiqizo yayo, yama-macadamia kanye ne-avocado emazweni ase-Europe, e-China namanye amazwe anezimakethe ezinkulu.
Ngiyajabula ukwenza isimemezelo sokuthi abamele lo mphakathi wase Ravele bakhona phakathi kwethu namhlanje. Inselelo yethu ukuqinisekisa ukusimama kwalesi sibonelo esihle sokubuyiselwa komhlaba ngempumelelo nokugqugquzela ukuphindaphindeka kwalolu hlobo lwempumelelo ukuze kube yinto evamile hhayi impumelelo eyiconsi eliyinqabakutholwa.
Uhlelo lokwabiwa kabusha komhlaba luhlala luyisihluthulelo sokuhlinzekela ukufinyelela komhlaba kubantu ababencishwe amathuba phambilini.
Kusukela ngonyaka ka-1994, ngokusetshenziswa kohlelo lokubuyiswa komhlaba, sizuze amahektha omhlaba ayizigidi ezingama-4,8 ngenani lika-R17 billion. Kula mahektha omhlaba ayizigidi ezingama-4,8, izigidi ezingama-4 ngodedangendlale bemilimela kanye namahektha angama-779 000 omhlaba anikezwa abasebenzi abaqashile kanye nezakhamuzi zasemapulazini ngenjongo yokuthi uguqulwe ukuze kwakhiwe izindlu. UMnyango ubuyise kabusha izimboni ezingama-1675 eziyisilinganiso samahektha omhlaba ayizigidi ezingama-1,5 ngezindleko ezingama-R4.8 billion.
Kulo nyaka wezimali esikuwo, uMnyango uhlela ukuthola amahektha omhlaba angama-98100 ngokusebenzisa Isu Lokusebenza Nokutholakala Komhlaba okusebenza kahle. Ukusebenza ngokubambisana kwezezimali kuyindlela yokuqalwa kohlelo lwePhakisa olusebenza ngokufanele. Abaqashwa nezakhamuzi zasemapulazini bazobekwa phambili.
Okokugcina, uMnyango uzothatha amapulazi angama-18 ukusekela ukuthuthukiswa komhlaba okusheshayo nokuhlelwa kabusha kwawo ukuze kusekelwe ezolimo zasemadolobheni kanye nokuvuselelwa kwamadolobha asezindaweni zasemaphandleni. Isabelomali esiphezulu
esingama-R1,2 billion silungiselelwe ukuthola umhlaba ukusekela lezi zinhlelo.
Izinkinga nekhono lokuphatha kuzinhlangano zemiphakathi kuyingxenye yezinselelo ezihamba phambili ezingumgoqo othiya ukusimama kohlelo lokuguqulwa kwezimiso zomhlaba. Sisanda kuhlongoza uMthethosivivinywa wokuchibiyela we-CPA futhi sithemba ukuthi inqubekelaphambili ekumisweni kwayo kuzokwenziwa ngawo lo nyaka esikuwo wezimali. Lo Mthethosivivinywa uhlinzekela ukusungulwa kweHhovisi loMbhalisi ozokwenza ngcono ikhono lokwelusa, ukuqeqesha nokubhekana nezingxabano ezingase ziqubuke.
Kuyadabukisa ukuthi ngonyaka ka-2018, eminyakeni engama-24 ngemuva kokutholakala kwenkululeko yentando yeningi, ukuxoshwa okungekho emthethweni, kanye nokuhlukunyezwa kwamalungelo ezamakhamuzi zasemapulazini kusaqhubeka. Kufikile ezindlebeni zami ukuthi kwezinye izingxenye zezwe, ukunyathelwa kwamalungelo abantu okungenabuntu okuvimbela abantu bangakwazi ukungcwaba izihlobo zabo emhlabathini abahlale kuwona impilo yabo yonke kuyaqhubeka. Lezi zigameko zihlukumeza futhi ziphazamisa isiko nokuhlonishwa kwamalungelo okusetshenziswa komhlaba esizama ukuwufaka.
Mayelana nalokhu, sizogxila ekuthuthukiseni ukuphepha kwezakhamuzi zasemapulazini ngokuchitshiyelwa komgomo okuhlongozwayo ku-ESTA (Ukwandiswa koMthetho Wokugcinwa Kwezokuphepha).
Enkulumeni ayethulela isizwe uMongameli wayalela ukuthi kuhlolwe onke amapulazi atholakala ngaphansi kwalolu hlelo lokuguqulwa kwezimiso zomhlaba. Sihlalo ohloniphekile, ngiyajabula ukwenza isimemezelo sokuthi sesivele siqalile ngalo msebenzi ophathelene namapulazi atholakala nge-PLAS (Isu eliqhamukayo lokuthola umhlaba). Kuze kube manje, sekuphelile ukuhlolwa kwesifundazwe saseNtshonalanga-Kapa. Ukusebenza kuzo zonke ezinye izifundazwe kuyaqhubeka futhi kuhloswe ukuba kuphothulwe ngoNovemba 2018.
Imiphumela yalokhu kuhlola izosiza uhulumeni aseke kangcono intuthuko yokuguqulwa kwezomnotho ngokuhlonza izidingo zokuqeqesha, izimo zezomnotho kanye nokusekelwa ngengqalasizinda.
UMnyango waphothula ukuhlolwa komhlaba kahulumeni ngo-2012. Ekuqaleni kwalo nyaka, sikhiphe umbiko weSigaba 1 socwaningo lomhlaba ophethwe ngasese. Nakuba kungase kube khona ukulinganisa okuthile kumqulu wolwazi oluqoqiwe olumayelana nokuhlukunyezwa ngokuhlukaniswa kwezinhlanga, lolu lwazi lunikeza isithombe esicacile ngephethini lokungalingani nokubandlululwa ngokobunikazi bomhlaba. Lo mbiko ucacile ngokuqondene nomnikazi wobunikazi bomuntu ngamunye, abamnyama baseNingizimu Afrika basala ngemuva futhi banomhlaba ongama-4% kuphela.
Isigaba esilandelayo socwaningo lomhlaba ophethwe ngasese sizogxila ekuhlukaniseni ulwazi mayelana nobunikazi bomhlaba ophethwe yizinkampani, amathrasti, ama-CBOs. Lesi sigaba socwaningo sizoqala ngalo nyaka wezimali esikuwo futhi sizosebenzisana nezinye izinhlaka zabathintekayo ekuqoqeni ulwazi oludingekayo esikholelwa ukuthi luzophonsa itshe esivivaneni ngezindlela ezamukelekile zokuguqulwa kwezimiso zomhlaba.
Kodwa-ke, njengabantu baseNingizimu Afrika, kufanele sikwamukele ukuthi noma kunemininingwane engatheni engumhlahlandlela engaqhamuka ngalolu hlelo lwesitatimende, kusukela ngonyaka ka-1995 kunama 2% amahektha kuzigidi ezingama-82 zomhlaba wezolimo owabiwe kabusha.
Lokhu kuchaza ukuthi asikasebenzi ngokugculisayo ukulungisa imigxobela yokungabi namhlaba okwadalwa ubandlululo. Kusho ukuthi akukatheli izithelo ezibonakalayo lokho okuyisivumelwano uMadiba akhuluma ngaso sokwakha umphakathi lapho bonke abantu baseNingizimu Afrika, abampisholo nabamhlophe, bazokwazi ukuhamba ngokuziqhenya, futhi beqinisekisiwe ngelungelo lokungathunazwa isithunzi nokungakhishwa inyumbazane.
Ukufaka isandla ekwenzeni ngcono ukuphathwa komhlaba noguquko kwezomnotho, uMnyango waqala ngo-2014 ukulungisa ngokunikeza amandla uhlelomgomo lokubhaliswa kwezindawo eziphethwe nguMnyango wesiFundazwe. Kuhloswe ukuqondisa ukubhaliswa kwezindawo ezigunyaziwe ngokulandela uhlelomgomo lwesiFundazwe njengoba kuchazwa kuSigaba 103 soMthethosisekelo kanye nokuqinisekisa ukuthi imisebenzi yokubhalisa kuziFundazwe leli Hhovisi elibekwe kuzona kufinyeleleka kalula kwabathintekayo.
Ngaphansi kwalolu hlelo, uMnyango usuvele ufeze izinyathelo ezibalulekile, phakathi kwaleyo mpumelelo ngokusungula iHhovisi Lokubhaliswa Kwezisebenzi esiFundazweni zaseLimpopo edolobheni lasePolokwane ngomhla ka-3 Ephreli 2017. Ukwahlukaniswa nokudluliselwa kwamarekhodi aseMpumalanga-Kapa esuka ehhovisi Lokubhaliswa Kwezisebenzi eliseKapa ngokuthi ahanjiswe bukhoma amanye adluliswe ngobuchwepheshe besimanje bamakhomputha.
Ukuthuthukiswa kwezindawo zasemaphandleni kuhlala kubalulekile ekuguqulweni kwezomnotho kwabampofu ezindaweni zasemaphandleni. Kulokhu, imisebenzi engama-5448 yadaleka ngokulandela lolu hlelo lokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya ngonyaka odlule.
Ngonyaka ka-2018/2019, sizogxila ekusebenzeni kwezindawo zomnotho ezingama-9 ezisezindaweni zasemakhaya eziphishekelwa ngaphansi kohlelo lwe-Agri-Park. Isinyathelo se-Agri-Park sizosiza ukuthuthukisa izindawo kubandakanya nokuhlanganiswa kwabantu okudidiyelwe, nokwenza isizinda somsebenzi wezomnotho esiqokothile, ngaleyo ndlela kuzodaleka amathuba omsebenzi azonciphisa ukungalingani, ububha nokuntuleka kwemisebenzi kubantu.
Inhlosonqangi yalesi sinyathelo ukuqinisekisa ukuthi emkhakheni wokubaluleka kwezomnotho wesibili abantu babandakanywa ngokugcwele kuhlanganise nokufinyelela ezimakethe ezivulelekile. Sizophinda sinikeze izinsizakusebenza zengqalasizinda yezamabhizinisi kulawo mabhizinisi ezomnotho asezindaweni zasemaphandleni futhi sikholelwa ukuthi kuzoba yingxenye yokuthuthukiswa komnotho, ukuvuselelwa nokusungulwa kwamadolobhana amasha asemaphandleni.
Ukuze lolu hlelo luphakame ngamandla, ukusekelwa okusuka kwabathintekayo abehlukahlukene kuyodingeka.
Sihlalo Ohloniphekile, njengoba ngiphetha, ake ngiphinde ngiqinisekise ukuzibophezela ekuthuthukiseni izinga lokusebenza kwethu ukufeza zonke izinhlelo esizibophezele ngazo njengoMnyango okubandakanya uhlelo lokuphatha jikelele ngemfanelo. Ukuze kuqinisekiswe ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kanye nezinhlelo zokuguqulwa komhlaba, uMnyango usuqalile ukwethula ukulungiswa nokuhlanganiswa kohlelo oluyoba nomthelela wempumelelo enhle.
Ngonyaka owedlule wezezimali, uMnyango wathola umbiko wokuphathwa nokusetshenziswa kwezimali oqukethe imibono yokuhlolwa engagunyaziwe, kepha i- akhawunti Yokuhweba Ngezimpahla kanye ne-Akhawunti yezokuThengiswa koMhlaba wezoLimo yathola imiphumela yokuhlolwa engenalo ugcobho. Sigcizelela ukuzibophezela kwethu ukuqhubeka nokuthuthukisa izinga lokuphatha okuhle okubandakanya ukusebenza kwethu ngokuzinikela nasekukhokhweni kwama-invoyisi zingakapheli izinsuku ezingama-30.
Indlela yokunika abantu bakithi umhlaba inzima, mhlawumbe kuze kubonakale okungathi ngeke kwenzeka, kodwa kufanele sikhumbule ukuthi uTata uMadiba usifundise ukuthi izinto zibonakala zingenakwenzeka kepha ukuthatha igxathu lokwenziwa kwezinto yilapho izinto zizoqala ukwenzeka khona ngempumelelo.
Ngala mazwi, Sihlalo Ohloniphekile, ngethula isabelozimali sika-2018/2019 soMnyango.
Amagatsha 2018/19 ​ 2019/20 ​ 2020/21
R'000 ​ R'000 ​ R'000 ​
Ukuphatha 1,825,416 ​ 1,869,203 ​ 1,992,908
NGMS 690,437 ​ 744,603 ​ 790,578
Ukuthuthukiswa Komhlaba 1,814,515 ​ 1,924,483 ​ 2,035,460
Ukubuyisela Kabusha 3,371,024 ​ 3,603,590 ​ 3,810,703
Ukuguqulwa Komhlaba 2,723,851 ​ 2,907,931 ​ 3,076,052
Inani 10,425,243 ​ 11,049,810 ​ 11,705,701